Mowqifka Jubbaland ee shirka Dhuusamareeb 3 | Keydmedia
Mowqifka Jubbaland ee shirka Dhuusamareeb 3
War-saxaafadeedka ayaa loogu baaqay in Beesha Caalamka gacan ka siiso dhinacyada Soomaaliya qabsoomidda shirka Dhuusamareeb 3.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowlad goboleedka Jubbaland oo soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadleyso shirka Dhuusamareeb 3 ayaa ugu baaqday in Beesha Caalamka Soomaalida gacan ka siiso qabsoomidda shirkaas oo ay haatan caqabado ku gedaamanyihiin.
War-saxaafadeedka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale lagu sheegay in doorkii Xukuumadda ee shirka Dhuusamareeb uu haatan maqanyahay, iyadoona weli aan la soo magacaabin Ra'iisul wasaarihii bedeli lahaa kii hore ee sida sharci-darrada ah xilka looga riday.
Jubbaland ayaa sheegtay in ay jiraan heshiisyo lagu gaaray shirkii Dhuusamareeb 1 iyo 2, kuwaas oo ku aadan arrimaha siyaasadda Jubbaland, haseyeeshee dowladda Soomaaliya aysan weli dhaqan gelin, iyadoo fara-gelin amni ka waddo deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo oo ay dhawaan ciidamo geysay.
"Dowladda Federaalka waxey degmooyinkii ugu amaanka badnaa Koofurta Soomaaliya ka dhigtay kuwa ugu amaanka xun, waxeyna fursad u siisay nabad diidka Al-Shabaab iney si sahlan masuuliyiinta iyo Shacabka ugu laayaan qaraxyo, waxaa xusid mudan in maanta oo ay taariikhdu tahay 17/08/2020 ay ku nafwaayeen 13 qof oo isugu jiro shacab iyo ciidan magaalada Beled-xaawo ee gobolka Gedo." Ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah war saxaafadeedka.
Ugu dambeyntii qoraalka ka soo baxay Jubbaland ayaa lagu sheegay in Jubbaland ay ku howlantahay bad-baadinta mirihii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 1 iyo 2, iyo go'aan ka gaaridda doorasho loo dhanyahay.
"Jubbaland waxaa ay ku howlan tahay sidii loo badbaadin lahaa mirihii ka dhashay shirarkii Dhuusomareeb 1 iyo 2 isla markana waxaa ay diyaar u tahay in go’aan loo dhan yahay laga gaaro qabsoomida Doorashooyin la isku raacsan yahay oo dalka ka dhaca wakhtigii loogu tala galay."